Mwaka weMuti, mahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Mwaka weMuti, yemahara kwenguva shoma
Idiki diki remba rakafanana nesiponji, mazuva ese ivo vanodzidza zvinhu, zvakanaka kana zvakaipa. Kutora mukana weiyi mamiriro ekuramba uchigamuchira ruzivo, muApp Store tinogona kuwana mafomu mazhinji ediki diki eimba, mafomu anotibvumidza kudzidzisa zvakakosha zvezuva nezuva zvevana vedu. Kunyangwe vanhu vazhinji vachifunga kuti hazvina kunaka kusiira iyo iPad kana iPhone kune vadiki kuti vazvivaraidze, isu tinofanirwa kufunga mashandisiro avanozviita, kunyanya kana pachinzvimbo chekutamba ivo vanoshandisa ekushandisa ekudzidzisa senge Mwaka weMuti, chishandiso chine mutengo wenguva dzose we1,99 euros muApp Store, asi kuti tinogona kurodha mahara kwenguva yakati rebei.
Mwaka weMuti unotora vana vedu parwendo rwemashiripiti uye risingakanganwike, kusango rizere nemavara, zvisikwa zvinoda kuziva uye nezvinetso zvinonakidza uko kwavanozviisa ivo mushangu yehuswa hwehusimbe. Mwaka weMuti unokurudzira kukura kwakazara uye kuyambuka-kudzidza nekupa matambudziko mairi vana vanofanira kukudziridza hunyanzvi hwavo hwemota, kuvandudza kuzivikanwa kwenhamba, kuwedzera ruzivo nezve mwaka wegore uye kuita hushamwari pakati pemhando dzakasiyana dzinogara mumasango.
Mwaka weMuti unoda ingangoita iOS 7.0 kana yakakwira kuti ishande, inoenderana neiyo iPhone, iPad uye iPod Touch uye inoitirwa vana vane makore ari pakati pe3 ne8.
Mwaka weMiti Zvimiro
Zvinobatsira kudzidzisa vadiki nezve kukosha kwehunhu uye mwaka yegore.
Inobatsira kusimudzira kufunga uye kufunga zvine musoro, nekuda kweshanduko yemwaka.
Yakanakisa pakuzivikanwa kwenhamba inowedzerwa.
Inopa kukurudzira kwakaringana kwenzvimbo dzako dzese.
Mitatu mitambo midiki inokurudzira vadiki pamwe nekuvavaraidza.
Kubata chaiyo mhedzisiro mhedzisiro, magiraidhi uye mifananidzo inoitirwa vana
Inoshanda Yekudzidza Maitiro
Yakanaka kune vana kubva pamakore matatu kusvika masere ekuberekwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Mwaka weMuti, yemahara kwenguva shoma
Kanex inopa GoPower, akasiyana machaji ekuchaja eApple Watch, yakakosha kiyi
Apple patents inoratidza kuti Apple Watch Dhijitari Crown ichauyawo kune iyo iPhone